Tag: menio fidirana wordpress | Martech Zone
Tag: menio fidirana wordpress
Efa te-hanitsy pejy na lahatsoratra amin'ny WordPress ve ianao ary kivy noho ny tsy fahaizanao nitady sy nahita ilay lahatsoratra? Ahoana ny fahafahanao manampy lahatsoratra vaovao mora foana? Ahoana ny fahitana ny pejy fidirana mora foana? DK New MediaIlay mpamorona mahatalanjona, Stephen Coley, dia nanome ny valiny tadiavin'ny mpampiasa WordPress rehetra… Teleport. Teleport dia menio kely mangatsiaka kely ho an'ny
Ny fiovan'ny ChaCha mankany amin'ny finday dia namirapiratra
Alakamisy, Aprily 10, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tsy azoko mihitsy (sy ny hafa) ny ChaCha. ChaCha dia maherifo tompon-tany any Indianapolis ary nahazo famatsiam-bola an-taoniny maro ao aoriany. Tsy azoko hoe maninona no misy olona manipy vola amin'ny motera fikarohana ataon'ny olombelona. Nieritreritra aho fa be loatra ny fampitaovana ary fandaniam-potoana… lany tamingana fahafatesana. Diso aho. ChaCha dia nanao zavatra nahagaga ahy. Fantatr'izy ireo hoe inona no mahaizy azy ireo - fikarohana marina